Oh.. My Blog!: 2007
အော် အခြေနေက ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ် တော့မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ငါဟာဂျစ်ပစီမိုးတိမ်ပါပဲ သီချင်းကို ထိုင်ဆိုရမလို ဖြစ်နေပြီ.. ဟိုပဲသွားရမလိုလို ဒီမှာပဲနေရမလိုလိုနဲ့ ဒီကြားထဲ စာရေးချင်စိတ်ကလည်းကုန်ခန်း နေ.. ဘလော့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ နည်းနည်းစိတ်လေနေတယ်ပေါ့ဗျာ..။ နဂိုထဲက ဘတ်စ်ကားပေါ် လုတက်ရသလိုမျိုး သုံးနေရတဲ့ ကော်နက်ရှင်က အဲ့ဒီဘတ်စ်ကားကိုပါ ခိုးစီးရတော့မယ်ဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်တာအေးတယ် ဖြစ်နေရော.။ ဘာမှမလုပ်ပဲနေတာ ကြာတော့လည်း ပျင်းနေပြန်ရော.။ သတိရပြန်ရော.။ ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့စာတွေ ဖတ်ချင်ပြန်ရော..။ အဲ့လိုနဲ့ မျောနေတဲ့စိတ်တွေကို စုစည်းပြီး ထွက်ပေါက်တွေ ရှာရပြန်ရောပေါ့လေ.။ WordPress မှာ ရသေးတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာ အစမ်းနေကြည့်တယ်.။ မဆိုးပါဘူး ဒါပေမဲ့ အိမ်က ပိုက်ဆံမပေးပဲ အလကား နေရတာဆိုတော့ နည်းနည်းလည်း ကြာလာရော ရယ်ဒီမိတ်ဟင်းတွေချည်းပဲ စားနေရသလိုမျိုး ခံစားမိလိုက်တာ.။ အဲ့လိုနဲ့.. အခု ဒိုမိန်းနိမ်းလေးကို မမီရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် လုပ်ဖြစ်တယ်..။ မဆိုးဘူးဟပေါ့လေ..။ ဒါပေမဲ့ ကွန်မန့်တွေက အပိတ်ခံနေရတာက ဟင်းကောင်းပေမဲ့ ထမင်းစားရတာ မ၀သလိုမျိုး ဖြစ်တော့ အပိုထပ်တောင်းရတာပေါ့လေ.။ ထိုသို့ထပ်တောင်းမိသည့်သကာလ.. (ရေးချင်တာက အခုမှစတာ... :P ) ဒီလိုဗျ... Haloenscan ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်ကို သုံးမယ်ဆိုပြီး Install လုပ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ရေးထားပေးခဲ့ အကြံပေးခဲ့ စာရေးတာတိုးတက်လာအောင် တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်တွေ အားလုံး ပျောက်သွားတယ်ဗျာ..။ အဲ့ဒီတွက် ရေးပေးခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကို ဒီနေရာကနေ တောင်းပန်ကြောင်း ရေးခဲ့ချင်တာပါ..။ ပျောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ မပျောက်သေးပါဘူး (ရှုပ်နေတာပဲ)။ ကွန်မန့်တွေကတော့ ဘာမှမပေါ်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ ကွန်မန့်တွေကို တိုက်ရိုက် လင့်လုပ်ကြည့်ရင်တော့ ရှိဦးမယ်ထင်တာပဲ။ အဲ ဟိုလိုဆိုတဲ့ ဟိုကောင်ကြီးကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ ပြန်မြင်ရမယ်ထင်တယ်..။ ဘာပဲပြောပြောလေ.. ကျနော် ဒီနေရာမှာပဲ နေပြီး နောက်ထပ် နေရာသစ် ဘယ်မှ မရွေ့တော့ဘူးပဲ စိတ်ကူးတယ်..။ ဂျစ်ပစီစိတ်ထားနဲ့ လျှောက်သွားနေခဲ့တုန်းက လာလည်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
အော်.. မေ့တော့မလို့... http://tesla.myanmarbloggers.org/ ကို မှတ်တိုင်ဆုံးတဲ့ထိ စီးလာပြီး ဘယ်ဘက်ကို မကွေ့ပဲ ညာဘက်ကို မကွေ့ပဲ တည့်တည့်ပဲ လျှောက်လာရင်လည်း
Oh.. My Blog! ကို တွေ့နိုင်ပါကြောင်း... ;)
Posted by Tesla at 2:45 PM | Links to this post
Summer, Stream & Rock....
စမ်းချောင်းလေး.. ကျောက်ဆောင် နဲ့… နွေ..
ဥတုသုံးလီထဲ. မင်းဘာလို့များ ပါနေရတာလည်း…။
လမ်း.. ကြောင်းက. ဝေး…
(လေးဖြူ၏ စီးဆင်းသွားတဲ့ စမ်းချောင်းလေး သီချင်းမှ)
ငါ့ညတွေဟာ တိတ်ဆိတ်စွာ အိပ်ရာဝင်တုန်း…
စမ်းချောင်းလေးရဲ့ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရီသံလေးတွေကြားရတဲ့အထိပေါ့..။
စမ်းချောင်းလေးရဲ့ မုန်းတီးမှုကိုပါ ခံခဲ့ရပြန်ရော..။
ငါဟာ.. မွေးရာပါ အမုန်းခံရဘို့ ဇာတာပါလာခဲ့ရတဲ့ နွေပါ……….။
သူဟာ ဘ၀မှာ အေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းလေးအဖြစ်နဲ့လည်း တရွေ့ရွေ့စီးဆင်းဘူးတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ရီသံတွေနဲ့အတူ နွေညတွေမှာ ကျောက်ဆောင်လိုလည်း အေးချမ်းဘူးတယ်။ ကြည်နှုးစွာ နဲ့ လရိပ်တွေအောက်မှာ စမ်းချောင်းလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ မြင်ခဲ့ဘူးသလို ကျောက်ဆောင်နဲ့ အထီးကျန်မှုတွေကို အတူတကွ ဖြတ်သန်းဘူးတဲ့ နွေရင့်ရင့် တခုအဖြစ် နေခဲ့ရဘူးတယ်။ ကြည့်စမ်း သူဟာ ငိုချင်းချသွားတဲ့ စမ်းချောင်းလေးလိုလည်း ခြောက်ကပ်စွာ စီးဆင်းဘူးတယ် ကျောက်ဆောင်လို တယောက်တည်းလည်း အထီးကျန်တယ် နွေလိုတောင်ပူပြင်းခဲ့ဘူးသေးတယ်..။ အခုကြတော့လည်း သူဟာ ဘယ်တော့မှ ဆုံခွင့်မရမဲ့ မိုးအမြင့်ထက်က ကြယ်စင်တွေခစားနေတဲ့ လမင်းကို ငှေးမော့ကြည့်ယုံလေးနဲ့ ကျေနပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ဖြစ်သွားပြန်ရော..။ သူ့ရဲ့ မှောင်နေခဲ့တဲ့ညတွေမှာ အဲ့ဒီလမင်းလေးဟာ အလင်းများနဲ့ ကြဲဖြန့်နှစ်သိမ့်ခဲ့ဘူးတယ်…။ မယုံမရှိပါနဲ့..။သူဟာ မကြာခင်မှာပဲ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ် သွားတော့မယ် ပင်လယ်သေ တခုဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by Tesla at 1:48 PM | Links to this post
ငှက်တကောင်ရဲ့ အမြင်မျိုးနဲ့ အပေါ်ဆီးက ကြည့်မိတယ်
ဟင် မြင်ကွင်းကမသတီချင်စရာဗျာ ငါ တွေချည်းပါလား..
သွားမတိုက်ရသေးတဲ့ မုန်တိုင်းက မြို့ကြီးကို ရှိခိုးလိုရှိခိုး.
စိတ်ပျက်တယ် ရိုးရိုးပဲ ငှဲ့ကြည့်လိုက်တော့.
ဟော့ဟိုမှာ မှိုချိုးမဲ့ မြစ်ချိုးမဲ့ သူတွေလည်းလာပြီ.
သွေးအေးအေးဖြတ်သန်းသူတွေလည်း တွေ့ရဲ့ ထားပါတော့.
နှိုင်းဆနိယာမကို မထားဘူး ယူသည်
အော်.. ရီရယ်လတီ တဲ့
ဟဲလို ဟိုင်း ဟောင်း.. နေကောင်းရဲ့လား..
ရေလိုက်ငါးလိုက် တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ကိတ်တခုစား.
အကုန် အစုံရလို့ ကုန်စုံဆိုင်လို့ခေါ်တာနေမှာပေါ့.
လက်နဲ့ထိတွေလို့ မရတာမှန်သမျှ အကုန်ရပေမဲ့
အဲ့ဆိုင်ထဲကို သတ်မှတ်တန်ချိန်ထက် ပိုသယ်လာတဲ့ယာဉ် ဖြတ်သန်းခွင့်မရှိဘူး
မဟော်သဓါ နေရာမရသလို အနော်ရထာ လည်း မပါရဘူး..
ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း ရောင်းဝယ်နေကြတာများ
သီချင်းတွေ သတင်းတွေ ပါကင်လှလှနဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေ
ချစ်တင်းနှောခြင်းကိုရော တစ်ရာဘိုး သုံးခုဝယ်လို့ ရပါသလား.
စင်းမ်စီးတီးရဲ့ မျှတတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု တခုက
အဲ့လိုနဲ့ လူဟာ ဘ၀ကို လေ့လာ၊ ဘ၀က လူကိုလေ့လာရင်း
တနေ့မှာပေါ့လေ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မသိသွားကြပဲ ပွဲသိမ်း သွားပြီကော.
ခရာမှုတ်တာ ပြီးတာ မဟုတ်ဘူး ပွဲပြန်စတာ။
ရေခဲစိမ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အေးစက်စွာ မြိုချပါ။
ဈေးကွက်ပျက်ထဲက အချစ်လို့ တံဆိပ်ကပ်
နံရံမှာ မှန်ဘောင်တတ်၍ ချိတ်ဆွဲပါ။
ရေမရောပဲ ရိုးသားမှုနဲ့ ရောသောက်ရတဲ့ ပျင်းရှရှများ ထွက်ကြလာသော
ပုလင်းကို မုဆိုးမအနမ်းလို့ ခဏလောက်တံဆိပ်ကပ်ပါ။
အီသနောကော မီသနောကော ကင်းစင်သော အယ်လ်ကိုဟော တခုကို
ပြတင်းပေါက်တွေကို သံစဉ်တခု အသုံးချ၍ဖွင့်ပါ။
အခမ်းထဲမှာ အမှိုက်များရှုပ်ပွစွာ ကျန်နေခဲ့ပါသလား။
အနာဂတ် အကြောင်းမစဉ်းစားပဲ ဒုက္ခတွေကို ခဏလောက် မေ့ပါ။
ခဏလေး အချစ်အကြောင်းတွေး.. ပြီးမှပြေးပါ။
နောက်ဆုံးမှာ ပြီးပါပြီလို့ စာတမ်းမထိုးပါနှင့်။
ရှင်မဟာသီလ၀ံသ မသိချင်ဘူးလို့ အော်ပါ။
ရှင်မဟာရဌသာရ ကိုမေ့လိုက်ပြီဟု စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါ။
ရှင်ဂွမ်းဂွိအကြောင်းဖတ်ပြီးပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရီနေခဲ့လိုက်ပါ။
အင်း… ပြီးတော့လည်း ပြီးတာပဲမလား.. အဟား ဟား ဟား ဟတ်
ဆိုပြီး ဗိုလ်အောင်ဒင်လို ပဲ ခပ်လွယ်လွယ်
Posted by Tesla at 10:52 AM | Links to this post